I-China Alloy Sliding Window Ares80-1 ifektri nabahlinzeki | Kinzon
I-Aluminium sliding windows I-Ares80-1 inezinhlaka ze-aluminium kanye nama-casings kuneyinsimbi, i-vinyl noma ukhuni. Lezi izinketho ezithandwayo phakathi kwabakhi cishe kunoma yisiphi isilungiselelo ngenkathi kungenzeka ukuthi uzibone ezindaweni zokuthengisa noma zezimboni kunezindawo zokuhlala. Ngenxa yamandla amahle kwesilinganiso sesisindo, iwindi le-aluminium sliding Ares80-1 lishintsha kakhulu.
I-Aluminium islayida iwindi-Ares80-1
I-5mm + 9A + 5mm ne-8mm ingilazi ethambile
Kunephrofayili yokulandelela isitebhisi ukugwema amanzi nothuli lwe-Aluminium sliding windows
Isipiliyoni silingana nekhwalithi ngentengo efanelekile. I-Aluminium sliding ewindini i-Ares80-1 inamakhasimende angaphezu kwesigidi anelisekile avela emazweni angama-40 neminyaka engama-20 yesipiliyoni. I-Aluminium sliding ewindini i-Ares80-1 inakekela zonke izinyathelo zenqubo, isekelwa ulwazi nesipiliyoni esiqhamuke emashumini amabili eminyaka ocwaningo nentuthuko yomkhiqizo.
Izici zesistimu ye-Aluminium sliding windows Ares 80-1
1. Inetha lomiyane: I-Aluminium sliding windows I-Ares80-1 ine-net mesh mosquito net ekulweni nobusela.
2. Ithrekhi ephezulu: I-Aluminium sliding windows I-Ares80-1 isebenzisa ukwakhiwa okubanzi kwethrekhi ephezulu.
3. Iphrofayili yengilazi ephansi: I-Aluminium sliding windows I-Ares80-1 isebenzisa ukuphakama okuhlukile ngaphakathi nangaphandle kwephrofayili yengilazi ephansi ukugwema ukuvuza komoya.
4. Iphrofayili yengilazi eqondile: I-Aluminium sliding window I-Ares80-1 inikeza i-arc yokuqinisa ukwakheka okuhlukile.
5. Iphrofayili eseceleni: I-Aluminium sliding ewindini I-Ares80-1 isebenzisa iphrofayili emithathu yokubopha uphawu ukuvimba amanzi ngaphakathi.
6. Amaculo: I-aluminium yokuslayida iwindi i-Ares80-1 inikeza amaphrofayili wethrekhi amabili noma amathathu okhetho oluhlukile.
7. Khiya: I-Aluminium sliding ewindini i-Ares80-1 inikeza ukhiye ongabonakali, ukhiye wesibambo noma ukhiye we-crescent.
8. Amakhokho: I-Aluminium sliding windows I-Ares80-1 isebenzisa izigaxa zenaylon kwizimbobo zokumba.
9. Ingilazi: I-Aluminium sliding windows Ares80-1 inikeza ingilazi eyodwa noma kabili (5 + 9A + 5) ukukhetha okuhlukile.
10. Ama-rolling: I-Aluminium sliding ewindini i-Ares80-1 isebenzisa amasondo wokulungisa ezithwele.
Esedlule: I-Aluminium Folding Window Ares75F
Olandelayo: Window Eshibhile Eyisisekelo Ares80